မူလစာမျက်နှာလုံခြုံရေးကင်မရာများ apps များ | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » အဆိုပါထိပ်တန်း5အကောင်းဆုံးမူလစာမျက်နှာလုံခြုံရေးကင်မရာများကို Apps ကပ 2019 အတွက် Download
အဆိုပါထိပ်တန်း5အကောင်းဆုံးမူလစာမျက်နှာလုံခြုံရေးကင်မရာများကို Apps ကပ 2019 APK ကိုအတွက် Download
သင်တစ်ဦးမြင့်မားသောရာဇဝတ်မှုနှုန်းမှာရှိပါတယ်သည့်ဧရိယာတစ်အိမ်မှာရှိပါက, သင်ကျိန်းသေသင့်အိမ်ရှိနေအိမ်လုံခြုံရေးကင်မရာများတပ်ဆင်ရန်လိုပေမည်။ မူလစာမျက်နှာလုံခြုံရေးကင်မရာများ apps များကယ့်ကိုစောင့်ကြည့်ဘို့နေရာလေးကိုလာကြ၏။ အကောင်းဆုံးကိုနေအိမ်လုံခြုံရေး app ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်အလွယ်တကူသင့်အိမ်ခြေရာခံစောင့်ရှောက်နိုင်ပါတယ်။ တချို့ apps များအလွယ်တကူချိတ်ဆက်နှင့်သင့်ကင်မရာနှင့်အတူချောချောမွေ့မွေ့အလုပ်လုပ်နိုင်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လက်ျာဘက်ကင်မရာ app ကိုရွေးချယ်ဖို့ကအရမ်းအရေးကြီးတယ်။
အကောင်းဆုံးကိုနေအိမ်လုံခြုံရေးကင်မရာများ app များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်နေအိမ်စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သများစွာကိုအသုံးပြုသူပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်နှင့်အညီ, နေအိမ်လုံခြုံရေးအတွက်အကောင်းဆုံးအိမ်တွင်းလုံခြုံရေးကင်မရာများ apps များစာရင်းပါပြီ။
ဤတွင်အသေးစိတ်ကိုနှင့်အတူအကောင်းဆုံးနေအိမ်လုံခြုံရေးကင်မရာများ apps များစာရင်းဖြစ်ပါတယ်
ဒါဟာအကောင်းဆုံးနေအိမ်လုံခြုံရေးကင်မရာ App ဖြစ်ပါတယ်။ Ivideon ထံမှပစ္စည်းကိရိယာများ၏အိမ်တွင်လုံခြုံရေးကင်မရာများနှင့်အမျိုးအစားများလည်းအလွန်ထိရောက်သောဖြစ်လူသိများကြသည်။ Ivideon အွန်လိုင်းအသံဖိုင်ကိုပြန်ပို့ပေးရန်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဒီ app ကိုနောက်ထပ်နေရာလေးကိုအင်္ဂါရပ်တစ်ခုခုတည်နေရာနဲ့ device မှအွန်လိုင်းတိုက်ရိုက်လွှင့်သည်။
သင်တို့သည်လည်းတစ်ဦးပိုမိုလွယ်ကူစွာလမ်းအတွက်သင့်ရဲ့ device ကိုကင်မရာကိုအသုံးပြုပြီးမည်သည့် Android device ကိုမှဤအိမ်မှာလုံခြုံရေး app ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။ သင်တို့သည်လည်း recover နဲ့ဒီ app နဲ့အတူသင့်ရဲ့မိုဃ်းတိမ်ကိုဒေတာသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင် Ivideon တစ်ယောက်ယောက်ကစောင့်ကြည့်တိပ်ခွေမှတဆင့် hacks သော်လည်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင် အသုံးပြု. အသံဖိုင်ကိုပြန်ပို့ပေး
အွန်လိုင်းမဆို device ကိုကျော်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစီး Watch သို့မဟုတ်
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် cloud storage
အဘယ်သူမျှမ Linux ကို client ကို
အဲဖရက် အလွန်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေများနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ကို Android device များအတွက်နေအိမ်လုံခြုံရေးကင်မရာ App ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ interface ကိုအလွန်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေသည်နှင့်သင်အမှန်တကယ်ရှည် login နဲ့ဆိုင်းအပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုခံယူဖို့မလိုပါ။ သင်တို့သည်လည်းဒီ app ထဲမှာလှပတဲ့အရောင်အစီအစဉ်ကိုချစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာအလွယ်တကူလုံခြုံရေးကင်မရာများသို့သင့်ရဲ့ smartphone ကိုဖွင့်နိုင်သည့်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေလုံခြုံရေးကင်မရာ App ဖြစ်ပါတယ်။ ဤနည်းကိုသင်အလွယ်တကူသင့်အိမ်လုံခြုံရေးထိန်းချုပ်မှုရနိုင်သည်။ သငျသညျဟောင်းစမတ်ဖုန်းအသုံးပြုနေသည်ဆိုလျှင်တောင်မှ, သင်သည်ဤ app ကို install လုပ်ပြီးကင်မရာကိုစဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ Additionaly, ဒီအိမ်မှာလုံခြုံရေး app ကိုအေးမြဒီဇိုင်းနှင့်ချောမွေ့စွာစွမ်းဆောင်ရည်ပါရှိပါတယ်။
အဟောင်းက Android ဗားရှင်းအတွက် start-up အတွက်တစ်ဦးကနည်းနည်းနှေးနှေး
Xeoma က Android app ကိုစောင့်ကြည့်ကာ IP ကိုကင်မရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတက်စတင်ရန်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေပြီးလွယ်ကူ apps များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သင်ရုံဆက်ကပ်အပ်နှံ IP ကို ​​အသုံးပြု. တဦးတည်းကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ IP ကိုကင်မရာလျော်သောဆက်သွယ်မှုများကိုသေချာစေရန်ရှိသည်။ Xeoma တူညီသောကွန်ယက်ပေါ်တွင်ရှိသမျှကိုချိတ်ဆက်မိတ်ဖက်ထွက်ရှာတွေ့မှစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့အင်္ဂါရပ်ပါရှိပါတယ်။ ဤနည်းကိုသင်အလွယ်တကူချိတ်ဆက် Wi-Fi ကိုကင်မရာများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
လူအပေါင်းတို့သည်ကင်မရာများဖော်ထုတ်မယ်ပြီးနောက်သင်တဦးတည်းဇယားကွက်ထဲမှာသူတို့အားလုံးကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။ သင်တို့သည်လည်းတစ်ပြိုင်နက်တည်းလေး IP ကိုကင်မရာများစောင့်ကြည့်ဖို့ Xeoma Lite ကို, အခမဲ့ဗားရှင်းသုံးနိုင်ပါသည်။ သင်တို့သည်လည်းစျေးပေါထိုသို့ upgrade နိုင်ပါတယ်။ Standard Edition နှင့်အတူသင်အလွယ်တကူအများဆုံး 3000 IP ကိုကင်မရာများထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ အလားတူပင်သငျသညျကိုလညျး Pro ဗားရှင်းနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသောမိုဃ်းတိမ်ရှိနိုင်ပါသည်။
သွားလာရင်းကို manually မဆိုကင်မရာအသံဖမ်း
သတိပေးချက်များ, ရွေ့လျားမှု-sensor ကိုအသံသွင်းနှင့်အခြားအလိုအလျောက်လှုပ်ရှားမှုများကို set up
ပွင့်လင်း app ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့်တစ်ပြိုင်နက်အပေါငျးတို့သကင်မရာများစောင့်ကြည့်
အခမဲ့ဗားရှင်းအပေါ်ကန့်သတ် features တွေ
Manything တက် Android ဗားရှင်း 4.2 နှင့်ပံ့ပိုးသော Android အတွက်အခြားအခမဲ့သူလျှိုကင်မရာ App ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, သင်အလွယ်တကူအဟောင်းက Android device ကိုအပေါ်ဒီ app ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်, သင်သည်သင်၏တက်ဘလက်သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းအပေါ်တိုက်ရိုက်ဒီ app ကိုမှဗီဒီယို stream နှင့်ကင်မရာရွေ့လျားမှုကို detect အခါတိုင်းသတိပေးချက်ရနိုင်သည်။
Manything ၏နောက်ထပ်အေးမြ feature ကိုသင်ကင်မရာအဖြစ်သုံးပြီးပြီ device ကိုမှတဆင့်စကားပြောနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သငျသညျကျူးကျော်သူတွေကရှောင်ရှားရန်နှင့်သင်ပယ်ရှင်းအခါလည်းသင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များစကားပြောနိုင်ပါတယ်ဒီ app ကိုသုံးနိုင်သည်။
အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေများနှင့်သွားလာရန်လွယ်ကူသည်ဖြင့်သန့်ရှင်းစေခြင်းနှင့် minimalistic app ကိုဒီဇိုင်း
သငျသညျကလစ်များ download လုပ်ပါနှင့်ငြိမ်ဝပ်နှင့်အတူမျှဝေနိုင်ပါတယ်
သင့်အနေဖြင့်မိုဃ်းတိမ်ကိုမှဗီဒီယိုများကိုသိမ်းဆည်းရန် paid အစီအစဉ်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်
သင်တစ်ဦးက hidden cam အဖြစ်မျိုးစုံ devices များအသုံးပြုချင်လျှင်သင်တို့သည်လည်းတစ်ဦးကိုလစဉ်ကြေးပေးသွင်းများအတွက်ပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်
i-လုံခြုံရေးအခြေခံအားဖြင့်အကောင်းဆုံး Android နေအိမ်လုံခြုံရေး apps များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျ၎င်းငျး၏စောင့်ကြည့် feature ကို အသုံးပြု. တိုက်ရိုက်ကွဲပြားခြားနားသောကင်မရာများစီးဆင်းနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းမိုဘိုင်းဒေတာသို့မဟုတ် Wi-Fi ကို အသုံးပြု. သင်၏ကင်မရာနှင့်အတူစီးနေထိုင်ကြသည်။ ဒါဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ပါတယ်ရသောကွဲပြားခြားနားသောအင်္ဂါရပ်များပါဝင်ပါသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သင်အလွယ်တကူအများအပြားဆာဗာများအတွက်ဒီ app ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ပါ။
သင့်ရဲ့ PC ကိုစောင့်ကြည့်ဘို့ကိုသုံးပါ
Reolink အရှိဆုံးကျယ်ပြန့်-အသုံးပြုသောနေအိမ်လုံခြုံရေးကင်မရာ app များကိုတစ်ဦးအဖြစ်လူသိများသည်။ ဒီ app ကိုရိုးရှင်းစွာ '' plug နှင့်ကစား '' ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်ကကောင်းစွာ IP ကိုကင်မရာများထောက်ခံပါတယ်အဖြစ်ဘာမှ configure ရန်မလိုပါဆိုလိုသည်။ ဒီအခမဲ့နေအိမ်လုံခြုံရေးကင်မရာ app ကိုနှင့်အတူ, သင်အလွယ်တကူသွားလာရင်းကင်မရာတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဒီ app ကို Google Play တွင်သန်း 2.5 ကျော် downloads, ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သငျသညျ၎င်းငျး၏တာဝန်ရှိသူတဦးက site မှဒီ app ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။
4 အမတ်စူပါ HD သို့မဟုတ်5အမတ်ဗီဒီယို Capture
190 ပေ။ ညဥ့်ရူပါရုံကိုမှတက်
Configurations နဲ့ setup ကိုရန်လွယ်ကူခြင်းမရှိပါ
ဝေးလံခေါင်သီနှင့်ဒေသခံ access ကို
AtHome ကင်မရာ app ကိုပြည့်စုံနေအိမ်လုံခြုံရေးကင်မရာသို့အဟောင်းတက်ဘလက်သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားသည်။ ဒါဟာကာတွန်း GIF များ၏ပုံစံအတွက်တစ်စုံတစ်ဦးကိုစုံစမ်းသိရှိလာပါတယ်အခါသင်အကြောင်းကြားရန်မျက်နှာထောက်လှမ်းပါရှိပါတယ်။ ကတိကျစွာလူတစ်ဦး detect နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့် AI အများနှင့်နက်ရှိုင်းသောသင်ယူမှုနည်းပညာများအားဖြင့် powered ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းသင်၏ Wi-Fi သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဒေတာကျော်အစစ်အမှန်အချိန်အတွက်သင့်ကင်မရာစီးဆင်းနိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာအစချောမွေ့ 2-လမ်းဆက်သွယ်ရေးအဘို့သင့်စမတ်ဖုန်းနှင့်လုံခြုံရေးကင်မရာနှစ်ခုလုံးကိုအပေါ်မိုက်ခရိုဖုန်းကိုအသုံးပြုသည်။ ဒါဟာအစဖွင့်ချိန်မှာအလိုအလျှောက်ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်နောက်ခံ run နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျက၎င်း၏မိုဃ်းတိမ်ကိုထောက်ခံမှုနှင့်အတူမျိုးစုံအသံသွင်းသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ သင်၌-app purchase နှင့်ကြော်ငြာများနှင့်အခမဲ့အဘို့ဤ app ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။
တိကျမှန်ကန်မှုအဘို့အ AI အများနှင့်နက်ရှိုင်းသောသင်ယူမှုများက Powered
အစစ်အမှန်အချိန်အတွက် stream ကင်မရာ
ဒါဟာသင် Android အတွက်အထက်ပါအကောင်းဆုံးနေအိမ်လုံခြုံရေးကင်မရာများ app များကို အသုံးပြု. သင်၏အဝုဏ်၏နှစ်ဆလုံခြုံရေးသေချာစေရန်နိုငျသောဟူမူကားမပါဘဲတတ်၏။ ထို့ကြောင့်, သင်သည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်မဆိုရွေ့လျားမှုနှင့် ပတ်သက်. သတိပေးမှုများရရှိရန်စိတ်ချပါငြိမ်ဝပ်စွာနေနိုင်ပါတယ်။
ထိပ်တန်းကင်မရာ Apps ကပ ...
Cawice - အခမဲ့ ...
5 ဘလူးတုသ် Apps ကပ၏အသုံးပြုမည်
android ဖုန်းများအတွက်နေအိမ်လုံခြုံရေး apps များ မူလစာမျက်နှာလုံခြုံရေးကင်မရာ adnroid apps များ မူလစာမျက်နှာလုံခြုံရေးကင်မရာများ apps များ